Heeskii Rigo (Dhaanto)
Dowladdo caalami ah oo ka qeyb qaadanaya mashruuc lagu hormarinaayo tayada socdaalka Soomaaliya.
on September 06 2013 Dowladaha Ingiriiska iyo Holland ayaa sheegay inay ka qeyb qaadan doonaan mashruuc lagu horumarinayo tayada iyo sare u qaadidda hanaanka socdaalka ee Soomaaliya.
Danjiraha Britain u fadhiya Soomaaliya Neil Wigan ayaa sheegay in mashruuca lagu tayeynayo socdaalka Soomaaliya ay ku baxeeyso lacag gaaraysa 2.5 milyan oo doollar, oo la sii marsiinayo hay�adda socdaalka adduunka (IOM).
Neil Wigan ayaa tilmaamay in mashruuca uu qeyb ka yahay qalab lagu horumarinayo socdaalka oo lagu ogaanayo xogta dadka socdaalaya, si loo helo kuwa sida sharcidarrada ah ku safraya iyo argagixada.
Wuxuu carrabaabay in mashruucan uu muhiim u noqon doono socdaalka Soomaaliya, isla markaana uu u oggolaanayo dowladda inay hesho nabad iyo dhaqaale.
Taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya jeneral Cabdullaahi Gaafow Maxamuud ayaa sheegay in tayeynta socdaalka ay ka caawin doonto isku xirnaasho dhinana safarka ah iyo in Soomaaliya ay wax la qeybsato caalamka intiisa kale.
Hadalkan ayaa laga jeediyay kulan shalay Muqdisho ay ku yeesheen madaxda laanta socdaalka, xubno ka socday hay�addda socdaalka adduunka iyo danjireyaasha Soomaaliya u fadhiya dalalka Inigiriiska iyo Holland.